Ciidamada Booliska oo Rasaas u adeegsaday Dadweyne isu-soo-baxay, qaarna Xasbiga u taxaabay | Somaliland.Org
Ciidamada Booliska oo Rasaas u adeegsaday Dadweyne isu-soo-baxay, qaarna Xasbiga u taxaabay
August 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland ayaa mar kale maanta Ciidamo Boolis ah oo tiro badan ku daad-guraysay Xarunta Baarlamaanka, kuwaas oo iyana Rasaas Nool u adeegsaday dadweyne aad u tiro badan oo halkaa isugu soo baxay.
Dadweyne aad u tiro badan oo ka gadooday tallaabo ay Xukuumadda Somaliland labadii maalmood ee u dambaysay Ciidamo xooggan ku geysay Xarunta Baarlamaanka iyo Jidadka ku hareeraysan, ayaa maanta isugu soo baxay agagaarka Xarunta Baarlamaanka iyo Jidka hormara Cusbatalka guud ee Hargeysa. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa fadhigii maanta oo aan Saxaafadda loo ogolayn, hase ahaatee la sheegay in lagu magacaabay Guddi turxaan-bixin ah ka dib, waxa uu Dadweynihii buux-dhaafiyay Jidadka hareero-mara Xarunta Baarlamaanka ugu soo baxay dibedda, kuwaas oo iyagoo ku dhawaaqaya hadallo taageero ah si niyad-sami ah u soo dhaweeyay, isla markaana kor u qaaday.
Intaa ka dib, Ciidamada Booliska ayaa Rasaas u adeegsaday kala dareerinta dadka, taas oo keentay in ay Dadweynuhu ka gadoodaan, isla markaana isu-soo-baxoodaasi uu isu-rogi gaadhay Mudaharaad ka dhan ah Xukuumadda. Waxaanay ku dhawaaqayeen Ereyo ka dhan ah Madaxweyne Rayaale iyo Xukuumaddiisa.
Ciidamada Booliska ayaa Xabsiga u taxaabay dadweyne aan tiradooda la sugin, kuwaas oo isugu jiray kuwii ka qyab-galay isu-soo-baxan maanta iyo kuwo loo tuhmay inay ka qayb-galeenba.
Waa maalintii labaad ee Xukuumaddu Ciidamo Boolis ah oo xooggan ku wareejiso Xarunta Baarlamaanka oo maalmihii u dambeeyay uu ka socday Khilaaf u dhaxeeyay Mudanayaasha ka soo kala baxay Axsaabta Mucaaradka iyo Muxaafadka. Tallaabadaas oo ay Shirguddoonka Wakiilada, Mudanayaasha Mucaaradka iyo Shacabweynaha reer Somaliland ay ka cadhoodeen.